Center Data Ukupholisa
Ukupholisa leKhabhinethi yangaphandle
Ukupholisa Telecom Site
Industrial yokuZenzekelayo Ukupholisa
Energy Storage Ukupholisa
AC enikwe iKhabhinethi yangaphandle zokupholisa kwi Spirit (US)
ngomphathi ku 18-10-24
XRow apholisayo isisombululo kwelinye iziko data umboneleli enkulu nkonzo intanethi kaThixo (China)
isicelo: umsebenzisi yenye ababoneleli beenkonzo intanethi inkulu eTshayina, apho idume iinkonzo zayo intanethi ezahlukeneyo. It owned Amaziko sibini data phakathi China ukuxhasa yendlela yayo data omkhulu. Envicool waba umboneleli isisombululo okupholisa enkulu ukususela 2013 iziko layo data kwi yayo ...
isicelo: Yizhuang IDC, enye inkwenkwezi-5 iziko data IDC eliphethwe China Unicom, i phambili iziko data isekela e Beijing China. Eli ziko Idatha kwenziwa ezininzi ezibalulekileyo iinkcukacha zendlela of China Unicom. Envicool wanikeza iiyunithi 62 lweenkqubo CRAC 100kW CyberMate le ziko data ngo-2013 ...
DC enikwe iKhabhinethi yangaphandle zokupholisa kwi Ooredoo (Iraq)